Miseensi paarlaamaa Naayijeeriyaa ji'atti $37,500 akka kaffalamuuf barame - BBC News Afaan Oromoo
Miseensi paarlaamaa Naayijeeriyaa ji'atti $37,500 akka kaffalamuuf barame
Goodayyaa suuraa Miseensa paarlaamaa Saaniin dhimmichi safuu natti taanaanan saaxile jedhu
Namni siyaasaa Naayijeeriyaa tokko ji'atti Naayiraan m13.5 [$37,500] baasii fedhaniif akka oolchaniif akka kanfalamuuf ummataaf ifa taasisanii jiru.
Miseensi paarlaamaa paartii biyya bulchuu 'All Progressive Congress' kan ta'an Shehuu Saanii, akkaataa qarshiin kun hojiirra oolu ilaalchisee itti gaafatamummaa muraasatu jira jedhan.
Namoonni gara siyaasaatti akka galaniif sababa guddaadha jechuun, kaffaltiin kun akka xiqqaatuuf waamicha dhiheessanii jiru.
''Akka saaxil bahuuf kananin murteesse dhimmichi safuu natti ta'ee jennaani,'' jechuun Miistar Saaniin BBC'tti himanii jiru.
''Manni maree biyyoolessaa qaamolee mootummaa iftoomina hin qabne keessaa tokkodha. Golgaa jiru kaasee qeeqa ummataaf akkan saaxilu kan na taasises kanuma.''
''Osoo kaffaltiin guddaa kun xiqqaatee, paarlaamaan keenya namoota yaada gumaataniin qofa guutama ture,'' jedhan.
Qarshoon kun kan kaffalamuuf mindaa $2,000 ji'aan kaffalamuuf irratti dabalataani. Akkasumas bajata bakka buutotaa $miiliyoona 5.5 waggaatti ni qabu.
Gama biraan mindaan xiqqaan lammiilee Naayijeeriyaaf kaffalamu, $50 qafaadha.
Miseensi paarlaamaa Naayijeeriyaas yaadni Miistar Saanii dhugaa ta'uu amanuun, ''waanti haaraa hin qabu'' jechuun ibsa.
''Waajjiraaleen mootummaa guutummaa guutuutti haala jedhamuun bajanni miindaan ala baasii akka taasisaniif kaffalamuuf ni jira,'' jechuun dubbi himaan tokko ni dubbatu.
Wiil Roos, riipportara BBC News Naayijeeriyaa duraanii
Manni maree Biyyoolessaa kaffaltiin hagamii namoota siyaasaaf akka raawwatamu lammiileen Naayijeriyaa akka hin barreef ta'e jedhee dhoksaa ture. Hanga Shehuu Saanii manichuma keessaa dubbii kana ifa taasisanitti.
Mindaan $2,000 ji'aan kaffalamu dhibee hin qabu, garuu seenaataroonni Naayijeeriyaa golgaan duuba qarshii olaanaa fayyadamni isaa itti gaafatamummaa hin qabne ta'e argachaa jiru.
Waggoota lamaaf erga tajaajileen booda seenaatarri tokko waliigalatti $ miiliyoona 3.5 argata.
Yeroo gara waajjira miseensi paarlaamaa tokkootti gortu qarshichi akkamiin hojiirra oolaa akka jiru ni hubatta. Namoonni hedduun hiriiranii eeggatu - 'kiisa seenaatarichaa keessaa harki yoo ba'u abdiin eeggachaa'.
Garuu kiisa isaanii keessatti kan hafe fi kan kaffalame kan beeku hin jiru.
Dhaabbileen siiviilii Naayijeriyaa keessa jiran, Miistar Saaniin kaffaltii ji'aa seenaataroonni argatan ifa baasuuf murtee fudhataniif simannaa gaarii taasisanii jiru.
Usmaan Abdul, pireezidantiin Duula Demookraasiif, kaffaltii kana qeeqanii jiru.
''Kaffaltii kanaan barattoota 100 ittiin barsiisuu dandeessa'', gaazexaa 'The Punch' jedhamutti himani. ''Seera baastonni dhimmakanaaf furmaata kennuun hiyyummaa fi hoji dhabdummaa biyyatti irratti hojjachuu qabu.''
Lammiileen Naayijeeriyaa amma yoonaatti dhimma faayinaansii bakka buutota isaaniirratti beekumsa hin qabne - aariisaanii miidiyaalee hawaasummaa irratti ibsaa jiru.
''Amma qarshiin Naayijeeriyaa garam akka deemu barree jirra,'' jechuun namni tokko 'twitter' irratti barreessee jira.
"Mooyyalee keessaa ummanni ganda afurii buqqa'eera"
US loltootashee Afriikaa keessa jiran %10 hir'isuuf
M/Jeneraal Kinfee Daanyaaw ofii abukaatoo akka qacaratan murtaa'e
Fiigicha Guddicharratti qorannoon qoricha jajjabeessuu taasifamuuf
Hiikni kiiloogiraamaa jijjiiramuuf
Ibidda saafaa US'n lakkoofsi namoota dhabamanii 631 gahe
Morookoon Afrikaa irraa abbaa baabura saffisu taate